AKHRISO: Madasha Xisbiyada Qaran oo taageeray Shirka ka dhacaya Dhuusamareeb | HalQaran.com
Home Wararka Maanta AKHRISO: Madasha Xisbiyada Qaran oo taageeray Shirka ka dhacaya Dhuusamareeb
AKHRISO: Madasha Xisbiyada Qaran oo taageeray Shirka ka dhacaya Dhuusamareeb
Muqdisho (Halqaran.com) – Madasha Xisbiyada Qaran ayaa soo dhoweeyay Shirka dowlad goboleedyada ku yeelanayaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay Madasha.
Madasha ayaa sheegtay inay ka xun yihiin baaqashada kulankii dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ku balansanaayeen Muqdisho 5-8 July, taasoo caddeyn u ah bay yiraahdeen fashilka hoggaanka sare ee dalka.
Madasha ayaa nasiib daro iyo fashil ku tilmaamtay in Madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ka maqan yihiin Shirka ka dhacaya magaalada Dhuusamareeb.
“Ka maqnaashaha hoggaanka dalka ee shirka ka dhacaya Dhuusamareeb waxaa ay muujineysaa ifafaallo aan wanaagsaneyn, Madasha Xisbiyada Qaran waxay kula dar-daarmeysaa madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya in ay u istaagaan gudashada waajibaadka ka saaran howlaha Dastuuriga ah ee suurto-gelin kara doorashooyin xor iyo xallaal ah, isla markaasna si nabad ah ku dhaca‘‘, ayaa lagu yiri War murtiyeedka Madasha Xisbiyada Qaran.
Halka hoose ka akhriso War-saxaafadeedka Madasha Xisbiyada Qaran: